Sarahah Pachena Danho | HacksDirect
Gumiguru 19, 2017 Uncategorized
Chave mishomanana, uye ichi Anwendung evanhu anonzi "Sarahah" Zvakatora pamusoro hafu yavanhu nguva yakawandisa evanhu nevezvenhau. Izvi razova itsva 'kupisa nyaya' wose ari kutaura uye kushandisa panguva iyoyo. Saka chii chaizvoizvo Sarahah? Zviri kushanda kuti rinopindura kutumira kusazivikanwa mashoko vanoshandisa ayo, uye yakanaka chinhu pamusoro ichi ndechokuti haufaniri ku nyoresa pachako pamusoro payo kuti kukwanisa kutumira mashoko. Kana uri hapana kumunetsawo kugamuchira kwavari, kungotuma navo vasina kunyoresa; zvirokwazvo ichi zvinotora yakawanda mutoro kubva pamafudzi wose.
The Anwendung iri nyore chaizvo kuti ishande. All unofanira kuita download kuna Android wako kana iOS slag. Kana uchida kugamuchira mashoko zvakare ipapo nokuda, uchava vanyorese pachako pamwe Anwendung nokupa mashoko akafanana zita uye kero ye email. Panewo Website kuti unogona kuwana, chete kana hauna foni yako, kuona mashoko uri kuwana. The Anwendung sokunge inofadza mumwe uye kunyanya pakati kuyaruka nokuti havagoni sezviri kure nayo chero nguva nokukurumidza.
vanhu kana vari kupiwa mukana kutaura kuti munhu asina kuzivisa kuzivikanwa kwavo, vanofanira vanowanzotevedzera kuyambuka bhodhi. Sezvinongoitawo ichi anowana inonakidza, rikawira duku kuziva kuti mumwe munhu kuziva ari kutumira mashoko ose avo. Unoda kuziva yave yako chakavanzika vanoyemura nguva ino zvose kana vamwe nzira kumativi. Waizonzwa sei kana iwe kuziva kuti pane pakupedzisira chimwe chinhu chinogona kukubatsira kutsemuka mazita avo? Pretty fara, rudyi? Saka, varibatanidze pachako nekuti zvatinazvo mune hurongwa kwamuri zviri kuitika kuuraya kuti havi vako.
The Sarahah anoratidza turusi ndiyo inenge Hack kupinda Anwendung ichi iyo inotiita kuti uzive mazita uye zvinocherechedzesa evaya kukutumai mashoko iwayo kusazivikanwa. It ane vasabatwa hurongwa naro rokushandisa IP kero rinamakwapa, uye zvadaro akakodzera mashoko akafanana zita uye kero ye email dzinoturwa kune imwe Kuwana. The turusi haisi chero nenzira zvisiri pamutemo, saka iwe haufaniri kunetseka kurishandisa. Inongova ikoko kuti upenyu hwako zvishoma kuziva.
Zvingagona ichi zvinoratidza turusi hazviperi. Zvino vane mukana kuziva chii vanhu kubasa kwako kufunga nezvenyu kana kuti vanhu iwe unodana shamwari dzako zvechokwadi shamwari dzako kana kuti kwete. Denga ndiro muganhu pamwe chokushandisa ichi; kuti chero bedzi vanhu pakuziva nezvazvo uye kurega kushandisa Sarahah Anwendung pakutanga. saka, kusvikira zvinoitika, shandisa mukana wako kupindura mibvunzo yose mumusoro yenyu yedu Sarahah zvinoratidza turusi.
Edza uye vanakidzwe!